See hantida dalka u ilaalinayaa Xeerka Hanti-Dhawrka Guud ee Qaranka? Xeerkii oo kooban – Kalfadhi
See hantida dalka u ilaalinayaa Xeerka Hanti-Dhawrka Guud ee Qaranka? Xeerkii oo kooban
November 24, 2018 Kalfadhi
Sharciga Hanti-Dhowrka Guud ee Qaranka ayaa haddii la ansixiyo waxa uu abuurayaa Xafiiska Hanti-Dhowrka Guud Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyada oo la daliishanayo qodobka 114-aad ee Dastuurka Ku-Meelgaarka ah ee JFS, waxa uuna waajibaadkiisu noqonayaa gudashada Xilka Hanti-Dhowrista ee Heer Federal, asaga oo sanadkiiba war-bixin koobeysa natiijada baaritaanadii la sameeyay la wadaagaya Golaha Shacabka iyo inta ay quseysee kale.
Sharcigani waxa uu shaqadiisa u madax-baneynayaa Xafiiska Hanti-Dhowrka Guud ee Soomaaliya, isla markaana waxa uu caddeynayaa in xafiiskani yahay midka kaliya ee Soomaaliya ka jira, Heer Federaal iyo mid Maamul Goboleedba. Xafiisku waxa uu warbixin siinayaa golaha shacabka iyo haddii loo baahdo Xafiiska Madaxweynaha iyo kan Reysal Wasaaraha.
Baaritaano madax-banaan, oo lagu ilaalinayo Hantida Qaranka, ayuu xafiisku samaynayaa, waxaana aasaas u ah baaritaankaas hufnaanta iyo daah-furnaanta Nidaamka Maamulka Maaliyadda ee Dowladda. Waxa uu talooyin siinayaa hay’adaha dowladda, si ay u saxaan una meel mariyaan Nidaamka Maamulka Maaliyadda Qaranka iyo ku dhaqanka sharciga. Waxa uu kaalmo xirfadeed siinayaa hay’adaha dowladda ee ay baahidaasi ka jirto.
Baaritaannada xafiiska waxaa ka mid ah ogaanshiyaha sida ay haya’daha dowladdu ugu dhaqmaan shurucda iyo Hab-raacyada Maaliyadeed ee loogu talagalay. Sidoo kale, waxa uu baarayaa dhamaan mashaariicda iyo shirkadaha ay dowladdu leedahay ama ay qeyb ka leedahay. Haddii uu tuhun baaritaanka ka soo baxo, waxa uu xafiisku macluumaadka la wadaagayaa hay’adaha ay quseyso, sida Xeer-Ilaalinta Qaranka.
Sharcigu waxa uu Xafiiska Hanti-Dhowraha ku waajibinayaa daba-galka hirgalka talooyinkii uu xafiisku horay u bixiyay iyo heerka sixitaanka ama sixid la’aantoodaba. Waxa uu xafiisku ku dadaali doonaa in laga gun gaaro habsami u xirmidda xisaabta sanadka ee lacagta dowladda.
Waajibaadka sharcigani saaray Xafiiska Hanti-Dhowrka waxaa ka mid ah in la dhowro oo la kaydiyo, si sharciga waafaqsan, dhammaan xisaabaadkii iyo baaritaannadii la sameeyay, in la hubiyo hab-raaca saxda ah ee isticmaalka hantida dowladda, bixinteeda, qabashadeeda iyo keydinteedaba, si waafaqsan Xeer Miisaaniyadeedka Golaha Shacabka.Tillaabo iyo baaritaan ama hubin kasta, oo uu xafiisku qaado, waxaa la xaqiijinayaa in ay raacday hab-raac sax ah oo loogu talagalay.
Laga billaabo markii uu helo xafiisku war-bixin xisaabeedka sanadlaha ah ee dowladda, ilaa muddo 3 bil ah ayaa laga rabaa in uu ku baaro oo uu ku soo saaro natiijo waafaqsan hab-raaca sharuucda xafiiska, kadibna war-bixinta natiijada baarista ayuu la wadaagayaa Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka, Madaxweynaha, Reysal Wasaaraha iyo ciddii kale ee ay quseyso, waxaana war-bixinta xafiiska ku jiri doonta aragtida Xafiiska Hanti-Dhowrka ee hay’adihii la baaray, talooyin loo jeedinayo hay’adihii la baaray iyo wax kasta oo gaabis ah oo lagu ogaaday baarista.
Sidoo kale, xafiisku waxa uu soo saari karaa war-bixinno gaar ah oo lagu baaray hay’ado gaar ah, kuwaas oo sanadkiiba mar baarlamaanka loo gudbin doono. Sharcigani waxa uu Xafiiska Hanti-Dhowrka awood u siinayaa in uu helo dhammaan macluumaadka iyo dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah gudashada waajibaadkiisa, sifa waafaqsan sharciga iyo hab-raaca barista ee xafiiska, waxa uuna sharcigani hay’ad kasta, oo ay dowladdu leedahay ama qayb ka leedahay ku amrayaa in ay si hufan ula shaqeeyaan Xafiiska Hanti-Dhowrka Guud ee Qaranka.
Sharcigani waxa uu qabaa in marka uu Xafiiska Hanti-Dhowrku u soo gudbiyo Golaha Shacabka, war-bixinta baaritaankiisa, uu Goluhu muddo 6 bilood gudahood ah dib u eegis ku samayn doono war-bixinta Hanti-Dhowrka; Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa, kadib marka uu warbixinta aqriyo, waxa uu ku celinayaa Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka, si ay u dabagalaan xogta Hanti-Dhowrka, iyagoo mararka qaar qaban kara isu imaatin dad-weyne, si su’aalo loo weydiiyo cidda ay wax ka sheegeyso war-bixinta Hanti-Dhowrka, kadibna waxa ay hubin iyo daba-gal ku samayn doonaan hirgalka soo jeedinnadii baarlamaanka iyo Hanti-Dhowrka.
Dhamaan dukumiintiyada iyo war-bixinnada uu Hanti-Dhowrku soo saaro waxaa loo tixgelinayaa in ay yihiin sir dowladeed, oo aan la faafin karin lana daabici karin ilaa loo maro hab-raaca sharciga Xafiiska Hanti-Dhowrka, waxaana la keydinayaa iyaga oo daabacan ama loo gudbinayaa cidda ay quseyso. Markiise loogu talagalo Xafiiska Hanti-Dhowrku waxa uu war-bixinnadiisa iyo baaritaanada la wadaagayaa dad-weynaha, iyadoo lagu baahinayo Mareegta Xafiiska Hanti-Dhowrka, si shacabku u ogaado sida loo maamulo hantida shacabka iyo canshuurtii ay bixiyeen.
Xafiiska Hanti-Dhowrku waxa uu diiwaan-gelinayaa dhamaan qandaraasyada iyo heshiisyada ay hay’adaha dowladdu la galaan dowlad kale ama shirkado gaar loo leeyahay. Nuqul ka mid ah heshiisyada ama qandaraasyada ay dowladdu gashay ayaa lagu keydinayaa Xafiiska Hanti-Dhowrka, isaga oo leh Shaabadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, xafiisku waxa uu diiwaan-gelinayaa oo uu keydinayaa dhammaan xeerarka iyo wareegtooyinka ka soo baxa laamaha dowladda.
Ma jiro qaab dhismeed gooni ah oo sharcigani ku jaan gooyay Xafiiska Hanti-Dhowrka, waxa uuse farayaa in Hanti-Dhowruhu soo sameeyo qaab dhismeed, kadibna la wadaago Guddiga Talo-Bixinta Xafiiska Hanti-Dhowrka Guud ee Qaranka, waxaana lagama maarmaan ah in hab-dhismeedkaas laga helo jagooyinka soo socda:
Kuxigeenka Hanti-Dhowraha Guud
Xafiiska Lataliyaha Sharciga ee Hanti-Dhowraha
Xafiiska Xoghayaha Guud
Xafiisyada Qaybaha iyo Unugyada
Baarayaasha iyo Howl-Wodeennada
Sharcigani waxa uu sharraxayaa sida loo magacaabayo Hanti-Dhowraha Guud ee Federaalka, waxaana baarlamaanka horkeenaya Golaha Wasiirrada shaqsiga ku soo baxa Hab-Raaca Doorashada Hanti-Dhowrka. Haddii Golaha Shacabku ansixiyo waxaa ku dhawaaqi doona Madaxweynaha JFS, waxa uuna xilka hayn doonaa muddo 5 sano ah, oo halmar oo kale uun la cusbooneysiin karo, isaga oo ku howl-gabi doonaa Da’da Hawl-Gabka Soomaaliya.
Sharcigu waxa uu qeexayaa siyaabaha uu Hanta-Dhowrku xilka ku waayi karo, waxaana ugu horreeya in uu iscasilo, in ay la soo gudboonaadaan wax sababaya in uusan xilka sii hayn Karin, markaana waxaa xilka kala wareegaya kuxigeenka ugu waaya aragsan ee Kuxigeennada Hanti-Dhowraha Guud. Sidoo kale, haddii uu dhinto ama ay soo wajahdo xaalad caafimaad darri ah oo uusan xilka la hayn karin iyo haddii maxkamadi dembi ku xukunto, waxa uu Hanti-Dhawraha Guud waayayaa xilka.
Sharcigani waxa uu abuurayaa Gudiga Latalinta Xafiiska Hanti-Dhowrka Guud ee Federaalka, waxaana ay ka koobanyihiin 7 xubnood oo sida soo socota kala ah:
Hanti-Dhowraha Guud ama qof uu xafiiskiisa ka soo magacaabo
Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ama qof uu xafiskiisa ka soo magacaabo
Xeer-Ilaaliyaha Guud ama qof uu xafiiskiisa ka magacaabo
Guddoomiyaha Guddiga Shaqada iyo Shaqaalaha ama qof uu xafiiskiisa ka soo magacaabay
Xubin Ururka Qareennada Soomaaliyeed ka tirsan
Xubin Ururka Hanti-Dhowrayaasha ka tirsan
Bare Jaamacadeed oo Cilmiga Hanti-Dhowrka ku taqasusay.
Xafiiska Hanti-Dhowrku waxa uu yeelanayaa miisaaniyad ku filan howlihiisa, kadibna waxa uu si waafaqsan hab-raaca diyaarinta Miisaaniyadda Qaranka uu ugu gudbinayaa Wasiirka Maaliyadda iyo Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka. Dib u eegis kadib markii uu Golaha Shacabku ansixiyo, waxaa xafiisku yeelanayaa madax-banaani miisaaniyadeed oo ku jaan go’an baahiyii uu soo gudbiyay, haddii loo baahdana, baarlamaanku waxa uu magacaabi karaa Hanti-Dhowre ka madax banaan Xafiiska Hanti-Dhowrka, si uu u baaro maaliyadda iyo war-bixinnada uu Xafiiska Hanti-Dhowruhu soo gudbiyay, si loo hubiyo isu dheellitirnaanta iyo hufnaanta hay’adaha dowladda.
Xafiiska Hanti-Dhowrku waxa uu xiriir toos ah la yeelan karaa dhamaan Xafiisyada Hanti-Dhowrka Guud ee Maamul Goboleedyada iyo Dowladaha Caalamka, waxa uuna sanadkiiba mar kormeer hantidhowris ah ku smayn doonaa dhamaan Maamul Goboleedyada, si loo hubiyo in lacagaha ay isticimaaleen ay martay kuna timid waddo sax ah.
Cid kasta, oo sifa aan sharci ahayn uga hor istaagta Hanti-Dhowrka shaqo uu qabsan lahaa ama macluumaad uu raadinayay, waxa ay geleysaa dembi qaran. Lama diidi karo baaris uu samaynayo Xafiiska Hanti-DhowrkA, isaga oo sifa sharci ah adeegsanaya, lamana siin karo macluumaad been abuur ah oo waxaa ka dhalanaya dembi.
Dhanka kale, shaqaalaha xafiiska Hanti-Dhowrka, oo uu gudoomiyuhu ugu sarreeyo, waxa ay gelayaan dembi haddii ay ku caddaato qaadashada laaluush, abaalmarin uu ku raadinayo tixgelin, samaynta war-bixin been abuur ah iyo xad gudub kasta. Dhamaan dembiyada uu sharcigani yaqaan ciddii lagu helo waxaa ay muteysan kartaa ganaax, xabsi ama wadajirkooda, si waafaqsan Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.
Sharcigani waxa uu hirgelayaa marka uu Baarlamaanka Soomaaliya ansixiyo, Madaxweynuhu saxiixo oo Faafinta Dowladda lagu soo saaro, waxa uuna baabi’inayaa sharci kaste oo aan la jaanqaadi karin.
Go’aan Muqdisho looga fulinayo dhismaha 10 kun oo guri ayaa kasoo baxay kulankii Farmaajo iyo Erdoğan
Kulanka Golaha Shacabka ee maanta waxaa hareyn doona doodda War-bixintii Guddiga Maaliyadda